Amanqaku kaStephanie Shreve kwi Martech Zone |
Amanqaku ngu UStephanie Shreve
Iibrendi ezinkulu zifumana, kokukhona iindawo ezihambayo zivela. Iimpawu ezithengiswa ngothungelwano lwabathengisi basekhaya zineseti enzima ngakumbi yeenjongo zeshishini, izinto eziphambili, kunye namava akwi-intanethi ekufuneka aqwalaselwe - ukusuka kumbono webrand ukuya kwinqanaba lendawo. Iimveliso zifuna ukufunyanwa lula kwaye zithengwe. Abathengisi bafuna izikhokelo ezintsha, ukugcwala kweenyawo ezininzi, kunye nokuthengisa okwandisiweyo. Abathengi bafuna ulwazi olungenamvisiswano kunye namava okuthenga - kwaye bafuna ngokukhawuleza.